नायिका जेनि कुँवरले गरिन आत्महत्या…. – HTV Khabar
नायिका जेनि कुँवरले गरिन आत्महत्या….
केही समय अगाडी निकै चर्चामा रहेकी नायिका तथा निर्मात्री जेनी कुँवरले आत्महत्या गरेकी छिन्। प्रहरी वृत्त, बाँनेश्वरका डीसएपी मिमबहादुर लामाका अनुसार, उनले आफू बस्दै आएको काठमाडौंको थापागाउँस्थित सनराइज सिटी अपार्टमेन्टमा झुन्डिएर आत्महत्या गरेकी हुन्।
प्रहरीले आत्महत्याको कारण डिप्रेशन हुनसक्ने जनाएको छ। उनी विगत १ बर्षदेखि डिप्रेशनमा थिइन्। जेनी विगत केही समययता पशुपति मन्दिर परिसरमा साधुको अवतारमा बसिरहेकी थिइन्। केही अघि उनको पशुपति परिसरमा नै विवाद समेत भएको थियो।
प्रहरी यतिबेला अपार्टमेन्ट पुगेर घटनाको बिषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। प्रहरीका अनुसार, जेनीको ‘सुसाइड नोट’ समेत भेटिएको छ।
जेनीले चलचित्र ‘धुम, मैदान, मिस्टर डन, हलचल, घायल, जीवनदाता, त्यागी मान्छे, हाम्रो मिलन कहिले हुन्छ, विन्ती पत्र, अभिमन्यू’ लगायतमा काम गरेकी छिन्।
उनले अभिनय तथा निर्माण गरेको चलचित्र ‘घायल’को ‘माया गर मायालुले’ बोलको गीत केही समय अगाडि टिकटकमा समेत हिट भएको थियो।
On २५ असार २०७८, I ०२:२५ By HTV Khabar
Previous Postसप्तरीमा ट्रक र बस ठोक्कियो
Next Postसर्लाहीको हरिवनमा ऐलानी जग्गामा बनेका गाउँ ब्लक जग्गाको लालपुर्जा वितरण